Dhul-gariir xoogan ku dhuftay dalka South Africa – Qoraasare Media
Dhul-gariir xoogan ku dhuftay dalka South Africa
By Hassan	 On Apr 3, 2017
Dhul- gareiie xoogan oo aan horay loo sii fikeynin oo ku dhuftay maanta qeybo ka mid ah waqooyiga waddankan South Africa.
dhul-gariirkan oo lagu qiyaasay 5.2 qiyaasta loo yaqaano “Richter” ayaa abaara 05.08 am marqura luxay deegaanadaasi ka tirsan dalkan gaar ahaan dhanka waqooyi, waxaana wararku ay sheegayaan in dhul-gariirku uu kasoo bilowday 5 KM dhulka hoostiisa, iyadoo goobta uu dhul-gariirku ka dhacay ay aheyd meel 8 km u jirta magaalada Northwest town of Stilfontein, 41 kmna u jirta magaalada Potchefstroom.
dadka dagaan magaalooyinka Pretoria, Johannesburg, Orkney iyo Klerksdorp ayaa ka mid ahaa dadka dareemay dhul-gariirkan, waxaana qaarkood oo aan weydiimay sida ay u dareemeen dhul-gariirka ay sheegeen in ay markii hore maleeyeen in uu train marayay meel iyaga ku dhow, hasayeeshee kuwa kale oo aad ugu dhawaa goobta uu ka dhacay dhul-gariirku waxay sheegeen in maleeynayeen in uu qof ama aalad guriga kor u qaadayo islamarkaana uu tuurayo.
wali ma oga haddi ay jiraan khasaaro nafeed waloow aanu shaki ku jirin in uu geystay dhul-gariirkan burbur hantiyadeed gaar ahaan midda maguurtada ah.
ma ahan markii uu uhu horreysay ee uu dhul-gariir ku dhufto dalkan hayeeshee marar sii horeysay ayaa waxaa dhacay dhul-gariiro noocan oo kale oo waliba ay qaarkood ka xoog badnaayeen kan maanta dhacay.
Wakiilka QM Keating oo kulamo la qaatay Madaxweyne Siilaanyo